आज, ग्लोबल जूता बजार मा एकदम लोकप्रिय ब्रान्ड खेल र आकस्मिक जूता को उत्पादन मा माहिर जो "Onitsuka बाघ" छ। कम्पनी को सबै भन्दा प्रसिद्ध उत्पादन आधुनिक डिजाइन र जापानी प्रविधि र उत्कृष्ट गुणस्तर embody कि जूता छन्। यो निर्माता को सबै जूता फरक चिन्न डिजाइन र उत्कृष्ट सुरक्षा गुणहरू छ।
को ऐतिहासिक बाटो
कम्पनी "Onitsuka बाघ" द्वारा प्रदर्शन रूपमा, उत्पादन को तेजस्वी गुणस्तर लागि प्रसिद्ध छ जापान, - ब्रान्ड को जन्म ठाउ। निर्माता विश्व प्रसिद्ध कम्पनी Asics को बिक्री प्रतिनिधिहरु को छ। कम्पनी को संस्थापक - Kihachiro Onitsuka।
कम्पनी 1949 मा फिर्ता स्थापित भएको थियो। 28 वर्ष पछि त्यहाँ एक मा दुई समान ब्रान्ड को एक सम्बद्धता थियो, र त्यसपछि नाम Onitsuka बाघ Asics द्वारा गठन।
ब्रान्ड "Onitsuka बाघ" को एक विशेषता सुविधा बाघ छाला र यसको विशेषता रंग प्रतीक कि पार्श्व धर्काहरू छन्। सबै जूता यसरी ब्रान्ड जवान मानिसहरूलाई आकर्षक छ, एउटा बरु उज्ज्वल रंग बनेको छ।
कम्पनी को कर्पोरेट लोगो जो तेर्सो रेखा को नै नम्बर काट्ने दुई ठाडो बारहरू छन्। यी ज्यामितीय स्ट्रोक को एडी जूता देखि सुरु। तिनीहरूले दृश्य कार्य मात्र प्रदर्शन, तर पनि खुट्टा पक्ष समर्थन।
ब्रान्ड को मुख्य विशेषताहरु
"Onitsuka बाघ" - एक अद्वितीय नवीन प्रविधिमा आधुनिक सामाग्री प्रयोग गरेको छ कि एक जुत्ता। यो ब्रान्ड को जूता को निर्माण को लागि सबै भन्दा लोकप्रिय सामाग्री प्राकृतिक साबर, छाला, कपडा र कृत्रिम मूल हो। एकमात्र को सजिलो र उत्कृष्ट दर गुण छ जो ईवा नवीन सामाग्री, बनेको छ।
नायाब उपस्थिति को कम्पनीको डिजाइनर एक आदर छ। Tandem शैली र आराम, स्थायित्व र बल जापानी ब्रान्ड चिन्न को मुख्य विशेषता हो।
उत्पादनहरु को फराकिलोकालागि दायरा र रंग को एक विशाल श्रेणी प्रत्येक ग्राहकको प्राण को छनौट गर्न अनुमति दिन्छ।
फेसनमा दुवै क्लासिक र खेल रुझान को हरेक सिजन लागि जूता खरीद को संभावना।
"Onitsuka बाघ" (जूता): ग्राहक समीक्षा
जापानी ब्रान्ड जूता एकदम स्टाइलिश र आधुनिक नजर छन्। कारण प्राकृतिक सामाग्री शीर्ष गर्न, जूता पूर्ण स्वच्छ र यो राम्रो देखिन्छ। चालु जूता धेरै सहज र नेत्रहीन खुट्टा, यो सही बनाउन कम।
खेल जूता "Onitsuka बाघ" एक धेरै, सहज स्टाइलिश र उज्ज्वल। प्रशिक्षक दैनिक जीवन साथै खेल सिद्ध छन्। यो जुत्ता undersized छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। माथिल्लो सामाग्री पूर्ण स्वच्छ, यसको मूल उपस्थिति गुमाउनु छैन।
दैनिक घटनाको लागि एक उत्कृष्ट विकल्प यो ब्रान्ड को जूता चलिरहेको गरिनेछ। तिनीहरूले एक sock मा unpretentious छन्। यो जुत्ता खेल गतिविधिहरु वा प्रकृति मा पैदल यात्रा को लागि एक वास्तविक Boon हुनेछ।
को दराज मा powdery रंग कस्तो संयोजन?
केम क्यामेरामा के हो र यसको साथ कसरी काम गर्ने हो?
Ekzoderil, समीक्षा र आवेदन को सुविधाहरू
बै्रन्ट कार्ल (हिटलर व्यक्तिगत चिकित्सक): जीवनी, उपलब्धिहरू र रोचक तथ्य